जगतराम राई, मुम्चे राई अर्थात बिद्रोही साईला तीन-तीनवटा नाम भएका एकै ब्यक्ति हुन् । उनका बिचार र कर्मले पनि यि तीनैवटा नामहरू सार्थक बनेका छन् ।
मुम्चे राई ठेट किराती राई परिवारका सदस्य भएर पनि बहुल जाति-भाषी राष्ट्रमा जगतराम राई हुन पनि तयार भए अर्थात उनले हिन्दुकरणको नाम पनि सिधै बहिस्कार गरेनन् र मुम्चे राई हुन पनि कहिल्यै भुलेनन् । यै हो बहुलजाति-भाषी-धार्मिक राष्ट्रका सचेत नागरिकले समादारमा बाँच्ने शैलीबाट गरिने शालीन बिद्रोह । त्यसैले उनी स्वयम् बिद्रोही साईला पनि बने ।
सानैबाट साहित्य-कलामा चाख राख्ने उनै बिद्रोही साईला २०४८ सालमा धरान झरेपछि कला-साहित्यमा तिब्र रुपले लागि परे । पराग परिवार धरानका संस्थापक अदक्ष समेत रहेर उनले दुनियाँका छोरा-छोरीलाई साहित्य-कलामा प्रेरणा दिँन सयौँ जुत्ता-चप्पल फटाए । सडक नाटक गर्दै सडक-सडक उत्रिए । साहित्यिक गोष्ठी कतै छोडेनन् ।
हाल दुबईमा कार्यरत बिद्रोही साईलाको 'एक किलो जङ्गल' प्रकाशित भईसकेको छ । नेपाली भाषा र आफ्नै मातृभाषा दुबैमा प्रखर कविता लेख्ने बिद्रोहीको आफ्नै मातृ-भाषाको कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशनको तयारीमा रहेको छ । २०२८ साल चैत्र २७ गते ओखलढुङ्गाको उँबू-१,खचापू गाउँमा आमा मशलीमाया राई र पर्शुराम राईका सुपुत्रका रुपमा जन्मिएका बिद्रोही साईला सामाजिक सेवामा पनि अग्रसर ब्यक्तिको नाम हो । उनको कवितामा दमित जाति र बर्गको उत्थानको निमित्त बिद्रोहको शालीन आगो भेटिन्छ । उनै ब्यक्तित्वसँग आलोपालो डट कमकालागि पत्रकार देवराज राईले लिएको अन्तरवार्ता यहाँ प्रस्तुत छ_
मुम्चे राईज्यू तपाई युएईमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
-- म यूएइमा श्रम गर्दै बचे खुचेकको समय सृजनामा लगानी गरिरहेको छु ।
जगत राई त मुम्चे राई भएछ नी ?
-- जगत राई होइन मेरो नाम खासमा जगतराम राई थियो दुइदशक भन्दा अगाडि तर अहिले म मुम्चे राई भएको छु किन कि, राई बाहेक जगत र राम दुवै हिन्दू पहिचान झल्कने नाम थियो पछि मैले आफ्नो मौलिक पहिचान झल्कने नाम मुम्चे रार्इ कायम गरेको छु ।
५० दशकमा पराग परिवारको स्थापना गरेर सडक नाटक गर्दै पूर्वाञ्चल भरि हिँडेको जोसिलो रङ्गकर्मी जगतराम राईको जीवन कहाँ पुग्यो ?
--- जगतराम राईको रङ्गकर्म सम्भवतः समकालीन साथीहरूको नजरमा मरिसकेको हुन सक्छ तर मैले मर्न दिएको छुइन । म मात्रै नभएर पराग परिवारका संस्थापक सदस्यहरू लगायत तमाम पराग परिवार प्रेमीहरूले मर्न दिएका छैनौँ । भौतिक र भौगोलिक रूपमा हामी टाढा रहे पनि हामी भित्रका सृजनाहरू सक्रिय नै छन् । म विगत बाह्र बर्ष देखि यूएइमा रहेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा अबद्ध भइ काम गरि रहेको छु जसमा म विशेषतः सांस्कृतिक फाँटलार्इ नै हेर्दै आएको छु ।
कला साहित्य सम्बन्धी रङ्गित पत्रिका पनि प्रकाशित गर्नु भएको थियो नी ?
— हो, हामीले पत्रिका प्रकाशन गर्ने सवालमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस को भित्ताबाट सुरु गरी न्यूज टाइमस हुँदै पछिल्लो समयमा रङ्गित सम्म प्रकाशन गर्न सफल भयौ ।
तपाइको कविता सङ्ग्रह एक किलो जङ्गलको बारेमा बताउनुहोस् न ?
---- मेरो कविता सङ्ग्रह एक किलो जङ्गल वास्तव मा असी प्रतिशत नेपालीहरूको कविता सङ्ग्रह थियो । जो हामी आफ्नै देसमा पनि अनागरिक जस्तै भएर दैनिक जीवनलार्इ एक किलो जङ्गल सङ्ग साट्न बाद्दे छौं तर कसैले मेरो कविता सङ्ग्रह पढेर यस्तो अनुभूतिको महसुस गरे जस्तो लागेन ।
युएईको साहित्यिक गतिविधिहरूको बारेमा केही जान्ने ईच्छा जाग्यो ?
— *यूएइका साहित्यकारहरू गुटबन्दी र झुण्ड-झुण्ड नभइ एक ढिकका भएर काम गर्ने हो भने धेरै राम्रा र सम्भावना बोकेका सर्जकहरू हुनुहुन्छ । तर साहित्यिक एकता भने देखिन्न । फेसबुके नेता र यूएइको साहित्यकारहरू उस्तै लाग्छ ।
तपाईले लेख्ने साहित्यलाई के भन्ने ?
— अस्त्र ।
कतिले त डायसपोरा साहित्य भन्छन नी ?
— नेपाली समाज र समुदायमा वर्ग र वर्ण छुट्याउने परम्परा साहित्यमा पनि हाबी छ । नेपालमा पनि हामीलार्इ कहिल्यै राष्ट्रिय नेत्रले हेरिइएन । आञ्चालिक भन्दै वर्गीकृत गर्दै गरे र अहिले पनि छ यो चलन । अव यस्तै डायसपोरिकको अर्को जन्तर झुन्ड्याएर साहित्यका ठेकदारहरूले हामीलार्इ अर्कै वर्णमा चाल्नो हाले । मैले यूएइमा बसेर रूकुमको कविता लेख्छु भने म कसरी डायसपोरा भित्र पर्छु ?
साहित्य केकालागि लेख्नुहुन्छ ?
— साहित्य म परिवर्तनका लागि लेख्छु ।
तपाई जनजाति अभियान कर्ता हो, आफ्नो जातीय हेरीटेज भाषामा चाही के गर्दै हुनुहुन्छ ?
— पहिलो चरणमा आफ्नै नाम आफ्नै मातृ भाषामा कायम गर्न सफल भएँ , मेरो मातृ भाषा वाम्बुले रार्इ हो तेसैले वाम्बुले रार्इ भाषाको प्रयोग गरेर किरात वाम्बुले लिपिमा बर्णमाला र स्थानिय तहमा पटन पाठनकोलागि पाठ्या पुस्तक प्रकाशनमा लागिपरेका छौं साथै मेरो दोस्रो संस्करण कविता संग्रह बिअम्ता प्रकाशनको लागि तयारी छ । आर्थिक सहयोग हल्का पाए तुरुन्त निकाल्ने वाला छु ।
युएईमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाका के कस्तो छ ?
-- यूएइ पढा-लेखाहरूको लागि यूरोप र अमेरिका हामी जस्ताहरूको लागि खाडी । अर्थाद, दक्ष कामदारहरूले महिनामा पचासौं लाख कमाएका छन् तर विना शिल्पका कामदारहरूले भने गुजारा चलाउन सारो छ ।
नेपाल कहिले फर्कने हो ?
— टुङ्गो छैन ।
पाठकहरूले तपाइको अन्य कृतिहरू कहिले सम्ममा पढ्न पाउने ?
— प्रकाशक पाएमा मेरो गीतहरू बजारमा ल्याउन चाहेको छु तर हामी चकारी र चापलुसी नजान्नेलार्इ सारो हुने रैछ ।
पाठकहरूलाई केही भनि दिनुहोस् न ?
---पाठकहरूलार्इ केहि भन्न मिल्दैन, मात्रै सहित्यिक सलाम ।
बिद्रोही साइला, हाल-यू.ए.ई.
लुगा काटे दमाई हुने फलाम काटे कामी
कर्मयोगी जो छौं साह्रा तल्ला जाते हामी
हलो जोते जातै जाने ब्राम्हान पण्डितहरु
ठगी खान नपएमा भोकै बस्छन् बरु
छाला काटे सार्कीहुने ढ्यांग्रो ठोके धामी
सिर्जनाका धरोहरा तल्ला जाते हामी
जांगरीला जाती साबै अछुत भएपछि
झुट्कोखेती कहिलेसाम्म गर्छौ वावै वसी
शिपको फूल फूलाउँदामा सब्ले भन्छन दामी
सिपालुको जातै सानो तल्ला जाते हामी